MAXAA LA SAMEEYAA HADDII AZALEA BAABA'O, CUDURADA UBAXA WEYN - FUSARIUM
Azalea (lat. Azalea) - warshad aad u qurux badan oo ka mid ah Rhododendron genus ee qoyska Heather. Ubaxwaxay jecel yihiin iskudhacyadii badnaa, geedka jilicsan ee cagaarka cagaaran. Si kastaba ha ahaatee, azalea ayaa sidoo kale ka xanaajin kara milkiilayaasheeda, inay soo gaadhsiiyaan tiro badan oo cudurro ah iyo duullaan cayayaanka. Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa sababaha ugu waaweyn ee cudurrada azalea iyo daaweyntooda.
Ma taqaanaa?Noocyo qurux badan oo ubaxyo ah iyo noocyo kala duwan oo ka yimid dalka Shiinaha, Japan, Southeast Asia, Europe iyo Waqooyiga Ameerika. Wadamada bariga, azalea waxay calaamad u tahay farxad, nabad iyo xorriyad. Azalea waxay ku timid dhaqanka in ka badan 300 sano ka hor. Bilowga qarnigii XIX, Captain Welbenck wuxuu ka yimid Hindiya shaybaar ganaax ah, oo noqday awo badan oo ka mid ah Beelaha kala duwan ee kala duwan iyo noocyada kala duwan ee loo yaqaan botanists oo ka dhalatay shaqada taranta dheer.
Calaamadaha waxyeellada dambe iyo daaweynta
Haddii aad aragto in caleemaha azalea ay bilaabaan inay bedesho midab, lakab, qalalan iyo dhicid, iyo sidoo kale kelyaheeda ay u dhintaan, kuwani waa calaamado cadaan. Sababta waxaa loo kordhin karaa qoyaan iyo heerkul sarreeya bey'ada deegaanka. Daweynta dhirta, daaweynta dareeraha Bordeaux ama "Fitoverm", waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad kordhiso marinada ciidda.
Maxaa la sameeyaa haddii azaleas leeyihiin ubax cadaan, sida loo daweeyo chlorosis caleen
Mararka qaarkood waxaad ku arki kartaa ubaxyada caddaanka ah ee lagu sameeyay dhinaca dambe ee caleemaha azalea, ka dib markii ay ku engegaan oo ay dhacaan. Sababta waa fomoz, taas oo dhacda marka waraabinta ku haboon ee warshadda iyo xadgudubka heerkulka qolka. Waxa la sameeyo
Ka-hortagga waxaa lagu buufinayaa azaleas oo leh 0.1% xalinta Topsin-M iyo 0,2% ee Fundazol. Hawlaha soo noqnoqda ayaa lagula talinayaa in lagu sameeyo saddex jeer mar 10kii maalmoodba mar.
Dhibaato kale oo la leh azaleas waa huruuda caleemaha. Sababta waa chlorosis. Waxaa jira cudur leh la'aanta nafaqooyinka carrada. Tilmaamo sidaas oo kale ah waxay soo jeedinayaan khasaare ka yimaada cusbada calcium ee dheriga ubaxa.
Daaweynta cudurku wuxuu ka kooban yahay soo bandhigidda nafaqada dhirta oo adag. Isticmaal bacrimin ah for azaleas iyo gardenias. Waxaad samayn kartaa dhar cad oo dhar cad.
Waa muhiim! Laguma talinayo in la dhigo azalea meelaha meelaha qorraxdu si toos ah u dhacdo.
Sida loo daaweeyo phylocystitis azaleas
Beeraha ubaxa waxay badanaaba yaabaan sababta azaleas u noqoto caleemo madow. Caleenta cagaarka caleemo caleemo leh caleemo caleemo leh ama caleemo madow ah oo ku taala geedka, kaas oo ka soo baxa kubbadaha isboortiga, waxaa loola jeedaa in azalea uu ku dhaco phyllostosis.
Si aad u caawiso ubaxa, ku dabool 0.2% xal "Fundazol" iyo 0.15% xalinta daroogada "Topsin-M", oo ku burburin caleemaha waxyeelada leh;
Ma taqaanaa? Qadarin leh azalea mararka qaarkood waxay noqon kartaa khatar. Wareegtadu waxay sababi kartaa madax xanuun daran, iyo caleemaha azalea iyo caleemaha ku dhagan biyaha la cabbo waxay keeni karaan sumeyn. Warshadani waxay leedahay hanti kale oo aan caadi ahayn: Haddii aad gooyo duufaanta azaleas oo aad u dhigto laydhka, laanku wuu sii faafi doonaa, sida haddii uu qoyan yahay.
Sida loo daaweeyo azalea ka Fusarium
Marka caleemaha azalea ay huruud noqdaan, asliga ah iyo xididdada qoyan, iyo ubaxyada casaanka ah ayaa la arki karaa collar xidid, kuwani waa calaamadaha koowaad ee Fusarium.
Si loo daaweeyo ubax cudurkan, waa in laga soocaa dhirta kale waxaana lagu daaweeyaa 0,2% "Fundazol".
Cabbiraadyada la dagaalanka Alternaria
Muuqaalka caleemaha iyo cawska ee warshadda midabka casaanka ah ee qaababka iyo qiyaasaha kala duwan ayaa tilmaamaya in azalea uu ku dhacay cudurka kale. Qiyaas ka hortag ah waa daaweynta Bordeaux fluid.
On caleemaha azalea, dhibco madow madow, daaweynta goleosporia
Haddii dhibco madow iyo / ama midab cagaaran ay ka muuqdaan caleemaha azaleas, iyo sidoo kale raadadka madow, waxay dareemaan bilaash si ay u sameeyaan cudurka-goryo. Sababta cudurkani wuxuu noqon karaa jabinta garaashyada madow, jiritaanka rhododendron, cudurka Fusarium.
Xaaladda gawaarida madow, dhirta waxaa lagu go'aamiyaa emulsion "Karbofos", haddii farta dhajinta ee muuqata ay ka muuqato azaleas - xalka "Fundazole" wuu caawinayaa. Iyadoo fusarium, daroogada "Diazinon" ayaa ku caawin doonta.
Waa muhiim! Azalea si xun ula dhaqmidda hawada qalalan, sidaas darteed ilaalinta geedka ku dhow dhaw qalabka kuleylka waa mamnuuc.
Sababaha cudurada xaddiga azalea iyo cudurkooda
Dhibcaha casaan-huruudka ah ee dhibco madow ee caleemaha dhirta ayaa sabab u ah in yaralea dhoobo ka dib ubax. Dhirta waxay leedahay septaria, taas oo sababi karta goor dambe bacarimis Bacriminta nitrogen, waraabin badan, iyo ma goynta waqtiga.
Wixii daaweynta daawooyinka fungicidal loo isticmaalo.
Waa muhiim! Biyaha kudhig ma aha mid ku haboon waraabinta azaleas. Waxay u baahan tahay in la siiyo waqti si ay u degaan, sidaa darteed lime wuxuu u degi karaa xagga hoose.
Iyadoo hoos u dhac ku yaalo heerkulka hawada ee ku dhow xadka azaleas, cirifka weyn ee caleen ayaa dhimata, iyo kor ka soo baxda waxay soo iibsaneysaa midab madow, oo muujinaya muuqaalka necrosis.
Waxaa jira noocyo of azaleas, kaas oo ka dib markii ubax qalalan iyo dayrta dhicin. Waxay dhacdaa inta badan jiilaalka. Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa waqtiga nasashada ee geedka. Ubaxa waxaa loo wareejiyaa meel qabow, mugdi ah, waraabinta dhererka, ha ku darin dharka sare. Wakhtiga intiisa kale wuxuu ku dhamaanayaa muuqaalka caleemaha cusub. Haddii azalea uusan kuusan bloomed, laakiin caleemaha waa la qubeyaa on, ka dibna daryeelka ee warshad waa in dib loo eego. Sidaa darteed, waxaan kugula talinaynaa inaad dooranaysid noocyo ubax u adkaysta dhaxan.
Azalea: Ka hortagga cudurka
Geedka, sida qof, waxay u baahan tahay fiiro joogto ah oo joogto ah. Sidaa daraadeed, waxaa lagula talinayaa in milkiilayaashu ay yar yahiin si ay u sameeyaan horumarinta sahlan ee hore ee koritaanka azalea iyadoo lagu daaweynayo daawada oxychloride bakteerokloride (qiyaasta ugu fiican) - waxay dili kartaa ilaa 90% fungi oo leh xal "Fundazole" (muddada difaaca jirka ilaa 25 maalmood) iyo dalbashada Bacriminta dabiiciga ah ee kor u qaadaya ilaalinta hawlaha geedka.
Kuwa soo socda waa tilmaamo kooban oo loogu talagalay daryeelka aasaasiga ah ee hoose:
Iftiin Waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo warshad leh meel iftiin ama shaag leh, laga ilaaliyo qoraxda tooska ah.
Waraabinta habboon iyo ionization of hawada. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo la kariyo ama dhalo biyo marka waraabinta, si looga hortago joojinta biyaha ee dheecaanka kiriimka si looga fogaado qoyaanka.
Waa muhiim! Waraabinta iyo buufinta geedka waa in uu si joogto ah subaxda u noqdo.
Heerkulka Azalea waxay dareemaysaa raaxo heerkul ah 12-15 ° C.
Ciid Mid ka mid ah shuruudaha muhiimka ah ee daryeelka waxaa laga beeri karaa dhulka heather (ama isku dhafka dhul-beereedka iyo peaty land leh oo lagu daro ciid webiga).
Bacriminta. Waxaa lagama maarmaan ah in ay ku quudiyaan azaleas xilliga kuleelka leh ammonium sulfate, xilliga qaboobaha - oo leh superphosphate.
Muddada ubaxyada. Ha ilaawin inaad isku xoqdo oo gooyaa dhirta dhirta si haboon. Bilaw inaad samayso bisha Maajo.
Iyo xusuusnow in daryeelka saxda ah ee warshad waa, ka sarre oo dhan, muddada dheer.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Fusarium 2019